COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား COVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း | Directorate of Investment and Company Administration
Why Invest in Myanmar?
Apply foraMIC permit
Online Recommendation Letter for Visa Extension
List of Recommended Companies
MIC PERMITTED COMPANIES ONLINE VISA APPLICATION SYSTEM (MOVAS)
Ministry of Investment and Foreign Economic Relations (MIFER)
» COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား COVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
၁။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ၂/၂၀၂၀ ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ COVID-19 ကြောင့် လတ်တလောစီးပွားရေးထိခိုက်မှု အများဆုံးခံစားရသည့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍများအဖြစ် CMP လုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးကုစားရမည့် ကဏ္ဍများအဖြစ် သတ်မှတ်၍ ၁၀၀ ဘီလီယံ ကျပ် ဖြင့် COVID-19 Fund ထူထောင်ကာ ချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးရန် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။
၃။ သို့ပါ၍ ဉီးစားပေးကုစားရမည့် ကဏ္ဍများရှိ အောက်ပါအချက်များနှင့် အကျုံးဝင် ကိုက်ညီ သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ချေးငွေရယူနိုင်ရေး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
၅။ ချေးငွေများကို သတ်မှတ်ထားသည့် အဆိုပြုလျှောက်လွှာပုံစံများဖြင့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့ရန် စာရွက်စာတမ်း အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံကိုက်ညီခြင်း မရှိသည့် လျှောက်လွှာများ ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၁၂။ Online ဖြင့်လည်း အောက်ပါ link မှ တဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ
Departmental Cooperation Team
Archive for Documents
No. 1, Thitsar Road, Yankin Township,
+951 658102, 658103